Ubume beNtengiso yeKhontenti ka-2014 | Martech Zone
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 19, 2014 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 19, 2014 Douglas Karr
Ngaba ukhe wazibuza ukuba baphi abanye abathengisi bedijithali abafezekisayo xa kufikwa kwizicwangciso zokuthengisa umxholo, kubandakanya ukubhloga, ukuvelisa, ukwabelana kunye nemilinganiselo? Ihamba ne Khangela incwadi HQ, I-Oracle Eloqua ibonakalisile baphendula njani abathengisi bedijithali kwiimfuno zezicwangciso zomxholo kule infographic.
Sifuna ukulinganisa umxholo wentengiso kunye nokuqonda okuthile kwizicwangciso zemithombo yeendaba ezifumanekayo, ezihlawulelwayo, ezihlawulweyo- yeyiphi imigaqo-nkqubo abathengisi abayilandelayo- kunye nendlela umxholo obhalwe ngayo kuhambo lomthengi, kunye neendlela eziphambili zokusebenza okubalulekileyo.
Epheleleyo Ingxelo yeNtengiso yeBenmarkmark Ibandakanya iimpendulo ezivela kubathengisi abangaphezulu kwama-200 kwimibuzo enje:
Zeziphi iintlobo zomxholo wabathengisi banamhlanje abawuvelisayo, rhoqo njani kwaye zeziphi iinjongo.
Abathengisi banamhlanje bawusebenzisa njani umxholo wabanye abantu.
Yeyiphi imiceli mngeni ephambili ejongene nentengiso yanamhlanje.
Ngaba abathengisi bale mihla balungelelanisa umxholo kunye nohambo lomthengi.
Zeziphi iimetrikhi zabathengisi banamhlanje abazithathileyo kunye nendlela abakuvavanya ngayo ukusebenza kokuthengisa.
Iimpawu eziphambili ezichaphazela imisebenzi yokuthengisa umxholo.
tags: 2014kublogaingxelo yokuthengisa umxholoimveliso umxholoiziqulatho zomxholokubloga kwequmrhueloquakwi-infographicincwadi yokujonga hquphando lwezentengisoOracleI-oracle eloquaimeko yokuthengisa umxholo
Imeyile kunye neMithombo yeendaba yeNtlalo Jugalbandi